Weedhii Shirka Dib U Dhigtay FAALLO: Weriye Barkhad-ladiif | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Weedhii Shirka Dib U Dhigtay FAALLO: Weriye Barkhad-ladiif
Hargaysa (SDWO): Hadalada qaar waxay kiciyeen dadka qaar, halka hadala qaarna dajiyaan, hadaladda ugu saameynta badan waa kuwo siyaasadda iyo siyaasiyiintu ujeediyaan bulshadda, ama qof kursi doonaya ku kicin karo umad isaga oo uga dhiga in kursigaasi reerkoodu leeyiin sida ay udhacsadaana ay ku xidhantay guusha kursigaasi.
Waraysigii Cabdisalaan Hereri la yeeshay madaxweyne Muuse Biixi natiijadda uu dhaliyey waxay noqotay inuu baajiyoo shirkii mudaba la waday ee beelaha qaarkood ku shirayeen bariga magaaladda Hargeysa.
Kooxda shirka wadatay waxay aaminsanayeen in madaxweynuhu aanu ogolaan doonin shirkaasi sababahan awgeed:
Madaxweynuhu wuxuu bedelay qaabkii wasiiradda lagu xuli jirey ee odayaashu ay keeni jireen wasiirka beeshoodda, wasiirku waxa uu u dabranaa odaygii keenay, haseyeeshee waxa uu ka madax banaanaysiiyey wasiirkii odayaashii beeshoodda ah.
Waxaanu ka mamnuucay in casuumadaha reerahooda ka qaybgalaan, isla markaana aan lagu arki Karin in arrimo reereed ama shirka beeshoodda ka qaybgallo.
Marka arrintaasi iyadoo maanka lagu hayo loo arki karayey in shirka beelaha uu ka mid yahay waxyaalaha la mamnuucayo, waxaana dadku intooda badan ka qiyaas qaadanayeen in aanu madaxweynuhu ogaalin doonin shir beleed dambe oo wadanka gudihiisa lagu qabto.
Iyadoo (Car) carin-taasi taallo ayaa shirkii ugu horeeyey ee beel ku dhowaaqdo intii xukuumada cusub timid noqotay in shirkan baryahan socday lagu dhowaaqo, waxaanu shirkaasi abaabulkiisu ka socday muddo afar bilood ah caasimadda Hargeysa, iyadoo warbaahinta lagala socday shirkaasi.
Dadku waxay is waydiiyeen sida uu madxweynuhu u qaabilo shirkaasi ma ciidamo ayuu dul dhigi oo wuu ka soo hor jeesan mise wuu fasixi ayaa dadku inta badan ka doodi jireen, haddii uu shirkaasi diido waxa imanaysa ficil aan dad markii hore shirkan u jeedin ama lacag ku bixin lahayn marka ay maqlaan shirkiinii baa la diiday aduun dul dhigaya ka dibna abaabul xoogan ka imanayo.
Guddida hawshaasi wadaana Faa’iido badan ka helayso mid sharafeed iyo mid dhaqaale, haddii madaxweynubu fasaxana aanay dadku dareen badan ka bixinayn oo wax caadi ah iska noqonayo.
Waxaana dhacdooyinka saamayn u yeela hadba xukuumadda jirta siday uga fal celiso hadii arrintaasi yaraysatana wuu yaraadaa hadii ay wax weyn ka dhigtana wax weyn buu noqdaa.
Hadaba, waraysigaasi u dambeeyey ee wax laga waydiiyey shirkaasi uga socda ee waliba ah beelihii wax tirsanayey ay qabsanayaan waa sida uu hadalka loo dhigaye, madxweynuhu wuxuu kaga jawaabay si ka duwan sidii dadku ka filanayeeen oo ah waxba kuma jabna qabashada shirkaasi.
Waxaanu sheegay in shirarka noocaasi ah ahaayeen kuwii Somaliland lagu dhisay, soona dhowweynaya wixii cabasho ah ee ka soo baxana la isla eegayo cidii lagu casuumaana ka qaybgali karto oo aanay waxba ku jabnayn.
Hadalkaasi wuxuu soo afjaray doodii ka taagnaa madaxweynuhu muu ogolaan mise wuu ka hor iman, waxaana hadalkaasi keenay in shirkii oo Maanta oo bishu tahay April,15, 2018 furmi lahaa dib loo dhigo mar hadii aanay xasarad badani ka taagnayn ay goorta doonaan qabsan karaan loona fasaxay shirkoodda.
Taasi waxay yaraysay dareenkii markii hore taagna ee la laha madaxweynuhu wuu ka hor imanaya ama wuxuu isku dayeyaa inuu shirkaasi fashiliyo.
Waxaanu jawaabtiisu keentay in si iskii ah uu iskaga hakaday shirkaasi oo odayaashi hawshan waday ay shalay ka hadleen oo ay sheegeen in uu dib loo dhigay muddo laba bilood ku dhow.
waxaan ku soo xidhayaa Waraabihii dhashiisii tobabarayey wuxuu yidhi waa intaas oo loogu sii dhowaado.
W/Q: Weriye Barkhad-ladiif Maxamuud Cumar